Madaxweyne Gaas oo daah furay Wajiga labaad ee Dhismaha Madaarka Boosaaso – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo daah furay Wajiga labaad ee Dhismaha Madaarka Boosaaso
Maajo 2, 2016 8:58 b 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 2-May-2016 garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee Boosaaso waxa uu kaga qayb galay munaasabad looga dhawaaqayey daah-furka dhammaystirka wejiga labaad ee garoonka Caalamiga ah ee Boosaaso.
Munaasabdda daahfurka waxaa kasoo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka dawladda Puntland, xubno ka tirsan labada gole ee dawladda Puntland, Wasiirka Duulista Hawada ee Soomaaliya, Danjiraha dawladda Talyaaniga u fadhiya dalka Soomaaliya, Danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, xog-hayaha guud ee urur goboleedka IGAD, Danjiraha Soomaaliya u qaabilsan IGAD, hay’ado ka socdey qaramada midoobey, Isimo, culumaa’udiin iyo dadweyne aad u tiro badan.
Munaasabadda ayaa ahayd mid looga dhawaaqayey daah-furka wejigii labaad ee Garoonka Caalamiga ah ee Boosaaso oo isugu jira 4-weji oo kala ah 1km oo lagu dari doono waddada ay diyaaraduhu ku ordaan (Runway), Terminal weyn oo lamid ah kuwa caalamiga ah, baarkinadii diyaaraduhu ay istaagi lahaayeen (Parking) oo la sii ballaarin doono iyo nalayntii ama iftiimintii garoonka, si’uu u noqdo mid habeen iyo maalin isku si’ loo adeegsado, isla markaana dhaqaalaha ku baxay.
Danjiraha dawladda Talyaaniga u fadhiya dalka Soomaaliya Ambassador Fabrezio Mercelli oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ballan qaaday in mashruucaan oo ka kooban 4-ta weji ee aan kor kusoo xusay ay dawladda Talyaanigu dhaqaalaha ku baxaya hal mar sii wada deyn doonto, isla markaana ay fulinta mashruucan u wakiilan doonto urur goboleed IGAD.
Sidoo kale Danjiruhu waxa uu ammaanay sida hufnaanta leh ee ay dawladda Puntland u fulisey wejigii koobaad ee Madaarka oo sidii loogu talo galay loo hirgeliyey isla markaana waxaa uu sheegay in dawladda Puntland ay tusaale u tahay Soomaalida inteeda kale iyo guud ahaan geeska Afrika.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dawladda Puntland ay aad usoo dhoweynayso uguna faraxsantahay taageerada lixaadka leh ee ay dawladda Talyaanigu siinayso Puntland, isagoona intaa sii raaciyey in dawladda Puntland iyo shacabkeeduba aanay iloobi doonin garab istaagga ay ka heleen dawladda Talyaaniga xilli ay aad ugu baahan yihiin.
Madaxweyne Gaas oo Mashaariic horumarineed Xariga ka jaray galabtay
(DHAGEYSO) Shacabka Garoowe oo cabasho ka muujiyey Sicir Barar ka jira caasumada Puntland